Hanome Hevitra Ireo Fitondrana Mpamoritra Hanitatra Ny Sivana Ve Ny Zo Hohadinoina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2014 6:52 GMT
Hita ao amin'ny bilaogy IGMENA ny lahatsoratra navoaka voalohany.
Maro ireo mpiaro ny zo any amin'ny faritra Arabo no manahy ny mety hanararaotan'ny governemanta ilay lalànan'ny “zo hohadinoina” an'ny vondrona Eorôpeana mba hamerana bebe kokoa ny fahalalahana mahazo vaovao sy maneho hevitra amin'ny Aterineto.
Fihaonan'i Ben Ali niaraka tamin'i George W. Bush tany Washington DC, taona 2004. Sary avy tamin'i Paul Morse, navoaka ho an'ny sehatry ny daholobe.
Omen'ilay didy alàlana ireo olom-pirenena Eorôpeana hangataka ny hanesoran'ireo loha-milina fikarohana ny rohy mankany amin'ny mombamomba ny tena manokana, voasokajy ho “diso, tsy marina, tsy mazava tsara na mihoa-pefy”, tsy hipoitra any amin'ireo valin'ny fitadiavana. Nanazava ny fitsaràna fa “tsy mandeha ho azy ho an'ny rehetra” ilay zo hohadinoina, ary mila jerena tsirairay araka ny zava-mitranga, mba hiantohana fa tsy hanohintohina ny zon'ny vahoaka hahalala, ny zon'ny olona iray hohadinoina.
Saingy hatramin'ny namoahana ilay didy, nitatitra ny Google fa efa nahazo fangatahana maherin'ny 135.000 isa mba hanesorana rohy ao amin'ireo valin'ny fitadiavana. Ny volana Aogositra, nanambara ilay lehibe indrindra eran-tany amin'ny loha-milina fikarohana fa nanaiky ny maherin'ny 50% amin'ireo fangatahana voaray izy. Tafiditra ao ireo rohy mikasika ny asa fanaovan-gazety manokana ary ireo lahatsoratra filazam-baovao nalefan'ny BBC, ny Guardian, ary ny Daily Mail, naverina tamin'ny toerany ny sasany tamin'ireo mba ho valin'ny tsy faneken'ireo mpanao gazety. Matetika mamoaka angon-drakitra voafantina momba ny fomba fiasa ilay orinasa, izay afaka jerena ato.
Inona no atao raha hampiharina ao amin'ny faritra Arabo io politika io?
Na dia voafetra ao Eorôpa ihany aza hatreto ny fampiharana azy, mety hanome hevitra ireo fitondrana mpamoritra mba hanitarana ireo sivana ataony eo amin'ny fampiasana ny Aterineto ilay lalànan'ny “zo hohadinoina”. Ny faramparan'ny volana May, nampitandrina ny Filoha Tale Jeneralin'ny Google, Larry Page, hoe “ho ampiasain'ireo governemanta hafa izay tsy mivoatra loatra sy mandàla fandrosoana toa an'i Eorôpa hanaovana zavatra ratsy io,”.
Tamin'ny tafatafa tamin'ny mailaka, nanoratra i Dhouha Ben Youssef, Toniziana mpiaro ny fahalalahan'ny aterineto sy ny fiainana manokan'ny tena , fa miray hevitra amin'i Page izy.
“Hahazo vahana amin'io fanapahan-kevitra io ireo governemanta ireo. Mety afaka hanafina zavatra mahamenatra ireo olona matanjaka, mba hiarovany ny lazany ato amin'ny Aterineto. Ohatra, nanazava i Ben Youossef hoe mety hangataka ny hanesorana ireo lahatsoratra mitsikera ireo politikany sy ny fanaparam-pahefany ireo mpanao politika,”. “Hisy fiantraikany lehibe amin'ny Asan-gazety mpanadihady ifotony vao misondrotra ao amin'ny faritra io.”
Tsy misy antony mihitsy tsy ahafahan'ny governemanta Arabo mametraka maodelinà lalànan'ny “zo hohadinoina” ho azy ireo manokana, rehefa te-hanao izany izy ireo. Mila manao lalàna iray hafa tsy refesi-mandidy fotsiny izy ireo, na mandidy ny ISPs (mpanome tolotra aterineto) fotsiny mba hibahana ny votoaty mifanohitra amin'ny foto-kevitra miteraka resabe.
Efa mamoaka lalàna hentitra sahady ireo governemanta ireo hanoherany ny fanalam-baràka ary hiarovana mafy ny fiainana manokana, izay rafitra mipetraka tsy misy fanaraha-maso na fandalovana amin'ny fitsaràna. Tonga dia mandà ny fahafahan'ireo mpampiasa Aterineto miditra avy hatrany amin'ireo loharanom-baovao ireo politika ireo, ary natao hanenjehana ireo maneho vaovao tsy marina na fanao tsy nety nataon'ireo mpiasam-panjakana sy ireo olona manam-pahefana ambony . Ny lohataona lasa teo, nanao fanadihadiana lalina mikasika ireo karazana lalàna ireo ny Social Media Exchange– Afaka atao ho toy ny tondrozotran'ireo mpiaro ny zo izay mikatsaka ny hanakànana ny fizorana ho any amin'ireny lalàna ireny ny asan-dry zareo.
Mametraka ny fototra ny lalàna mifehy ny heloka bevava atao amin'ny Aterineto an'ny Emirà Arabo Mitambatra (UAE)
Ny taona 2012, nandany ny Lalàna Federaly Laharana faha. 5/2012 ny UAE, hiadiana amin'ny heloka bevava atao aty amin'ny Aterineto, izay lazaina fa “manome fiarovana ara-dalàna ny fiainana manokan'ny tena navoaka tamin'ny Aterineto.”
Kanefa, toy ireo lalàna maro nentina hanoretana efa nolanian'ireo fanjakàna Arabo nandritra ny taona maro izay, fitaovana iray hafa entina hanamarinana ny fanesorana ny zavatra voalaza sy ny tsy fitovian-kevitra politika ety anaty aterineto indray io lalàna io.
Ahitàna lisitra tsy mahalaza manontolo ireo hetsika voaràran'ny lalàna io didim-pitondràna io, lazaina fa helohin'ny lalàna avokoa ireo rehetra ireo ary sarosaronana ho fiarovana ny fiainana manokana. Ataon'io ho ivelan'ny lalàna :
…ny fampiasàna tambajotra elektronika, na fitaovana teknolojika fampitam-baovao rehetra natao hanitsakitsahana tsy araka ny lalàna ny fiainana manokan'ny hafa, amin'ny fihainoana, ny fangalàna, fandraisam-peo na ny famoahana ny resadresaka, serasera, amin'ny fitaovana ahenoana feo sy ahitàna lahatsary; maka sarin'olon-kafa, mamorona sary elektronikan'olon-kafa, ny famoaham-baovao, ny fandikàna mitovy na fitahirizana azy ireny; famoahana vaovao, sary elektronika na saripika na toerana itrangan-javatra, fanehoan-kevitra, angon-drakitra sy ny mombamomba ny hafa, na dia marina aza izy ireny.
Misy teboka iraisany, izay mety hampidi-doza, ny zo hohadinoina sy ny didim-pitondràn'ny UAE mitondra ny laharana 5/2012: samy mamepetra ny famoahana ny votoaty marina izy ireo, manana tanjona ny hiaro ny zon'ny hafa amin'ny fiainany manokana. Ao amin'ireo faritra Arabo, toa hanafenana ireo porofon'ny toetra ratsy ataon'ireo mpanao politika sy ireo mpiasam-panjakana no tanjona. Raha any amin'ny vondrona Eorôpeana, natao hiarovana ny fiainana manokan'ny tsirairay ilay zo hohadinoina, mampiahiahy ihany anefa ny fahazoan'ireo mpanao politika ao amin'ny vondrona Eorôpeana mahazo io zo hohadinoina io.
Tsy tokony hohadinoin'ny Aterineto na ny tany tontolo anefa ireo toetra tsy mendrika sy kolikolin'ireo mpanao politika rehefa miala amin'ny toerany izy ireo. Hitantsika rehetra hoe toy ny ahoana ny fangetahetan'ireo mpiasam-panjakana ireo fahefana indray , fotoana fohy taorian'ny nialàny tamin'ny toerany. Vao haingana izao ny filoha Frantsay teo aloha, Nicolas Sarkozy, no nanambara ny fiverenany amin'ny fanaovana politika, na dia teo aza ny fitoriana azy ho nanao kolikoly. Any Tonizia, izay anaovako asa fanaovan-gazety amin'ny tenako manokana, miverina eo amin'ny sehatra politika ary milatsaka amin'ireo fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena ireo mpiasam-panjakana izay niasa teo ambanin'ny fitondrana teo aloha notarihan'i Zine el-Abidine Ben Ali, fitondràna nodidian'olon-tokana sy feno kolikoly.
Mety misy ny hilaza fa efa zava-misy ny sivana ety amin'ny Aterineto any amin'ny faritra, ary tsy hanatsara na hanaratsy io zava-misy io ny fanapahan-kevitra amin'ny zo hohadinoina an'ny vondrona Eorôpeana. Marina izay amin'ny lafiny sasany, fa samy hafa ny ambaratongan'ny fanivanana eo amin'ny Aterineto arakaraky ny firenena samy hafa. Raha misy ireo governemanta sasany mampihatra be ny fanivanana eo amin'ny Aterineto, ny hafa kosa mitazona io amin'ny faran'izay kely indrindra.
Any Tonizia, ohatra, nisokatra tsara ny fampiasana ny Aterineto ary toy ny tsy nisy fanivanana hatry ny nahatratrarana an'i Ben Ali. Nanomboka tamin'izay, mpiasam-panjakana maro tao amin'ny governemanta no nangataka ny fanasiana sivana mba hiadiana amin'ny “fanalàm-baràka” sy “fampihorohorona.” Atsy ho atsy, mety hanomboka hangataka ny fanivànana ny Aterineto izy ireo mba hiarovana ny zon'ny hafa hohadinoina, amin'ny filazàna fa na dia i Eorôpa “demôkratika” aza mampihatra io zo io.
Manana zavatra betsaka hianarana amin'ireo fomba fiasa tsy manaja ny demokrasia ireo mpanao didy jadona, amin'ny “demokrasian'ny firenena Tandrefana”
“Ho an'ireo Mpitatitra vaovao Tsy Voafetran-Tsisintany (Reporters Without Borders – RWB), raha asehoan'izy ireo ahy ny fomba fanarahan'i Frantsa maso ny sehatry ny Aterineto, vonona ny hifofotra hanao tsaratsara kokoa izahay.” Toy izany ny valiny nomen'i Mongi Marzouk, minisitry ny Teknolojia sy Serasera (ICT) teo aloha, raha nitsikera ny governemanta Toniziana ny RWB tamin'ny fametrahana ilay Masoivoho Teknikan'ny Fifandraisan-davitra, natao hanadihady ireo “herisetra amin'ny ICT.”
“Nataon'io lalàna io ho tondrozotra ny Fifanarahana Natao tany Bodapest [momba ny amin'ny heloka bevava atao amin'ny Aterineto],” hoy i Marzouk mba hiarovana ilay didim-pitondràna nametrahana ilay masoivoho. Na dia nanao dingana iray lehibe aza ny Fifanarahana tany Bodapest tamin'ny fametrahana izay tokony ho arahana amin'ny lalàna maneran-tany momba ny heloka bevava atao amin'ny Aterineto, mbola tsy tonga lafatra ihany — maro ireo olona misolovava no mieritreritra fa tsy ampy hiaro tsara amin'ny fampiasana ireo teknolojia sasantsasany tsy ho amin'ny zavatra ratsy ilay Fifanarahana.
Tsy mihambahamba ireo tompon'andraikitra Arabo milaza fa demôkratika mitovy amin'ireo an'i Eorôpa ireo fomba fanaony sy ireo lalànany, na dia tsy izany aza. Maka lesona avy amin'ny fomba fiasa tsy demokratika amin'ny “demokrasian'ny firenena Tandrefana” ihany koa izy ireo. Mitovy amin'ny fampiasana ny fitsikilovana faobe ataon'ny NSA afaka manampy ny jadona, dia afaka manao izany koa ny zo hohadinoina.
Ilain'ireo mpanao lalàna amin'ny vondrona Eorôpeana ny miutahiry ao an'tsainy fa ny lalàna tsirairay izay arafiny sy laniany dia na mety manome hevitra ireo mpitaky fanovàna miaro ny demokrasia any amin'ireo firenena tsy dia mbola anjakan'ny demokrasia loatra, na hanitikitika ireo mpanao didy jadona hanao “zavatra ratsy.” Izy ireo izany no tokony hisafidy ny lafy tiany ho raisina.